ट्राफिक दाई फाल्दिनुस् छातीको क्यामेरा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
जबसम्म त्रिपुरेश्वरमा सवारी नियम उलंघन गरेको चालकलाई कलंकी नपुग्दै पक्रिन सक्ने संयन्त्र बन्दैन तवसम्म छाती ÷छातीमा क्यामेरा भिर्नु अनि बाटोमा दर्जनौ डमी ट्राफिक राख्नुको कुनै अर्थ रहन्न ।
बिहान सात बजेको थियो । म माईतीघर मण्डला नजिकबाट मोटरसाईकलमा अनामनगर जाँदै थिएँ । मेरो आँखा एक्कासी ट्राफिकको डमी ट्राफिक भएतिर पुगे जहाँबाट लाइनै तीनवटा मोटरसाइकलले युटर्न गरेर बाटो काटेर अगाडी गए । एक त त्यो ठाउँमा युटर्न निषेधको बोर्ड राखिएको छ त्यसमाथि पनि त्यत्रो ट्राफिक प्रहरीको लमतन्त परेको स्ट्याचुले उनीहरुलाई हेरिरहेको थियो । तर पनि ती चालकहरुले टेरेनन नियम उलंघन गरेरै छोडे । रिसले मेरो जिउ नै सिरिङ भयो । तर, के गर्ने कसलाई रिस पोख्ने मैंले ?
हुनत मलाई त्यो डमी ट्राफिक राखेको दिन देखि नै त्यसको प्रयोग र उपादेयताको बारेमा सन्देह थियो । तर, आज त्यो दृश्य देखेपछि भने मेरो सन्देह यथार्थमा परिणत भयो ।
यतिखेर अनामनगरबाट भद्रकाली जानेबाटो नजिक राखिएको त्यो डमी ट्राफिकघाम पानीले पुरै खुइलिएर निरीह जस्तो बनेर उभिएको छ । म सधै त्यहि बाटो हिड्ने हुनाले दिनको दुई पटक त्यो स्ट्याचुको दर्शन नगरी मलाई धरै छैन । केही समयअघि सम्म त्यसको खुट्टामुनि एउटा व्याट्री पनि राखिन्थ्यो । त्यो किन राखिन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर हिजोआज भने त्यो व्याट्री त्यहाँ देखिन्न । मेरो अन्दाजमा हिजोआज त्यस डमी ट्राफिकलाई राती ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लगेर थन्क्याइदैन ।
यो त भयो ट्राफिक प्रहरीले हजारौ मुल्यमा खरिद गरेर ल्याएको स्ट्याचुको कथा । हुनत साँच्चिकै ट्राफिकलाई चालकले नटेरेर हैरान बनाएको अवस्थामा स्ट्याचुलाई कसले टेर्ने ? त्यो पनि सँधै एकै स्थानमा तेस्र्याएर राखेपछि मान्छेले थाहा पाएर पनि नटेर्ने नै भए ।
अव डमी ट्राफिको कथालाई एकै छिन थाँती राखेर छातीको क्यामेराको कुरा गरौं । केही महिनाअघि मात्र ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि छातीमा राख्ने क्यामेरा झिकाएको थियो । छातीको क्यामेरा पनि त्यतिखेर निकै चर्चित बनेको थियो । विशेष गरि लेन मिच्ने सवारी चालकलाई प्रमाणको रुपमा देखाउनलाई झिकाइएको रे यो छातीको क्यामेरा । यो क्यामेरा पनि कति झिकाइएको छ के कति स्थानमा ट्राफिकको हातमा छ त्यसको यकिन डाटा मलाई थाहा छैन । तर, मैले भने यो छातीको क्यामेरा त्यहि अनामनगर त्रिपुरेश्वर थापाथलीका ट्राफिक दिदीहरुको छातीमा मात्र देखेको छु ।
यो छातीको क्यामेराको कथा झन चाखलाग्दो छ । नेपालका सवारी चालक कति सम्म बलिया रहेछन त । उनीहरुले ट्राफिक नियम उलंघन गरेको प्रमाणीत गर्न ट्राफिकलाई क्यामेरा नै चाहियो । त्यसमा पनि जारिवानाको कुरा आएपछि हामी तिर्दैनौ भनेर बन्द हड्ताल नै गर्छन । पहिलो कुरा त ट्राफिक प्रहरीले यदि चालकलाई सजाय गर्न सक्दैन भने त्यो भन्दा निरीह कुरा के भयो ? तिनले किन लगाउने ट्राफिकको बर्दी ? दोश्रो कुरा यदि उनीहरुले अनावश्यक चालकलाई दुख दिने काम गरेका भए उनीहरु नै जानुन । तर चालकले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाएपछि सरकारले बनाएको नियम पालना गर्नुपर्छ यो नियम पालना गर्न लगाउने काम ट्राफिक प्रहरीको हो ।
आजको दुनिया प्रविधीको हो । सन्सारले प्रविधीमा यति धेरै फड्को मारिसक्यो तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ हामी भने छातीमा क्यामेरा भिरेर हिंड्दैछौ । र यसैलाई अत्याधुनिक प्रविधी भनेर ढोल पिटाउछौ । सिसि क्यामेरकाले निगरानी गर्न छाडेर छातीको क्यामेरामा अल्झिनु भनेको हत्केलालाई सूर्यले छेक्न खोज्नु सरह हैन र ? नेपाल सरकारसँग हरेक थोक गर्न पैसा पुग्छ मुख्य मुख्य सडकमा सिसि क्यामेर फिट गर्न पुग्दैन । अबको जमाना छातीमा क्यामेरा लिएर लाइन लाइनमा तेर्सिने होइन अवत त्रिपुरेश्वरमा नियम उलंघन गरेको चालकलाई कलंकी नपुग्दै समातेर सजायको भागिदार बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्तो खालको व्यवस्थापनलाई ट्राफिक व्यवस्थापन भन्न मिल्दैन ।
हामीमध्ये धेरैले विदेश गएर देखेका छौ । जहाँ दुर्घटना भएको २ मिनेटभित्र प्रहरी आइपुग्छ,सवारी नियम उलंघन गरेर सवारी साधन चलाएमा घरमै गएर ट्राफिकले समात्छ । त्यो सब हाम्रो देशमा लागु किन नगर्ने ? अवको युग भनेको धेरै भन्दा धेरै अत्याधुनिक र लेटेस्ट प्रविधिको प्रयोग गर्ने युग हो ।
सडकमा भेडा बाख्रा हेरेजस्तो गरेर ट्राफिक छोडेर मात्र हुन्न ट्राफिक प्रहरीलाई समय सुहाउँदो ,शिप र प्रविधीयुक्त बनाउनु पर्दछ ।
पहिला भन्दा धेरै ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो भएको ट्राफिक प्रहरीले बताइरहँदा म उनीहरुलाई च्यालेञ्जका साथ भन्न सक्छु केही पनि भएको छैन । यदि, हो भने बेलुकी ५ बजेको समयमा टेकुबाट थापाथली निस्कन किन एक घण्टा भन्दा बढी समय लाग्छ ?
तसर्थ ट्राफिक प्रहरीले ल्याएको डमी ट्राफिक र छातीको क्यामेरा दुबै ट्राफिक व्यवस्थापनमा पुराना र फेल भएका साधन हुन अवको विकल्प भनेको चोक चोकमा सिसि क्यामेर राखेर कन्ट्रोल रुममा राखेर हेर्ने कुन गाडीले नियम उलंघन गर्छ ‘अन द स्पोट’ समातेर कारबाही गर्ने हो ।